Football Khabar » आज रियल मड्रिडलाई ग्रानाडाको चुनौती : घरमा दबाब थेग्ला रियलले ?
आज रियल मड्रिडलाई ग्रानाडाको चुनौती : घरमा दबाब थेग्ला रियलले ?
स्पेनिस ला लिगा फुटबल प्रतियोगितामा आज विभिन्न ४ खेल हुँदैछन् । आज हुने खेलहरूमध्ये एक खेलमा रियल मड्रिड र ग्रानाडाको रोमाञ्चक खेल हुनेछ । यो खेल रियलको घरेलु मैदानमा नेपाली समयअनुसार राति ठीक १२ः३० बजेबाट सुरु हुनेछ । लिगको १५औं साताको खेल घरेलु मैदान अल्फ्रेडो डे स्टेफानो रंगशालामा खेल्दा रियलमाथि आज ठूलै दबाब हुनेछ ।
यो सिजन लिगमा राम्रो सुरुआत गर्न नसकेको रियल पछिल्लो समय उत्कृष्ट लयमा फर्किएको छ । उसले पछिल्ला ४ खेल सबै जितेको छ । आज ग्रानाडाविरुद्ध खेल्दा ऊ लगातार पाँचौं जितको खोजीमा हुनेछ । लिगको एक मबजुत टोलीविरुद्ध रियल आज उत्कृष्ट जित निकालेर आफ्नो लय कायमै राख्न चाहन्छ ।
हाल अंक तालिकामा रियल १४ खेल सकिँदा २९ अंक बनाएर दोस्रो स्थानमा छ । रियल हालकै स्थितिमा एक खेल कम खेलेको शीर्ष टोली एथ्लेटिको मड्रिडभन्दा ३ अंकले पछि छ । आजको खेल जिते रियलले एथ्लेटिकोसँग ३२ अंकबराबरी गर्नेछ । तर, एथ्लेटिकोसँग थप दुई खेल बाँकी हुनेछन् । यता, आज रियलको घरेलु मैदानमा उत्रिन लागेको ग्रानाडा १३ खेलपछि २१ अंक बनाएर सातौं स्थानमा रहेको छ ।
यो सिजन रियलले १४ खेलमध्ये ९ खेल जितेर २ खेल बराबरी गर्दा ३ खेल हारिसकेको छ । यो सिजन केही अप्रत्यासित हार भोगेको रियल आज ग्रनाडाविरुद्ध उत्रिँदा निकै चनाखो भएर खेल्नेछ । यसअघि रियललाई नयाँ टोली क्याडिज र अलाभेसले अप्रत्यासित हारको सिकार बनाइसकेका छन् । यी हार चाखेर आएको रियल आज ग्रानाडासँग सचेत छ ।
आज आफ्नो घरमा खेल्दा रियलको टोलीमा प्रमुख खेलाडी इडेन हाजार्ड चोटमुक्त भएर टोलीमा फर्किंदैछन् । कप्तान सर्जियो रामोस, फेडे भाल्भर्डेसहितका प्रमुख खेलाडी टोलीमा ठीकठाक छँदैछन् । लुका मोड्रिच आज पनि टोलीमा छैनन् । तर, लामो समयदेखि चोटका कारण टोलीबाहिर रहेका लुका जोभिच भने टोलीमा फर्किएका छन् । सम्भवतः आज उनले कमब्याक गर्नेछन् ।
प्रकाशित मिति ८ पुष २०७७, बुधबार १६:५७